Cajiibka: Qalabka Kaydka Websiteka ugu Qodobbada badan si loo soo saaro Xogta Internetka
Dhamaan qalabka shabakada s ayaa loo sameeyay Macluumaadka laga soo qaado bogagga internetka ee jira. Waxay faa'iido u leeyihiin qof kasta oo isku dayaya inuu ururiyo macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ka socda World Wide Web. Nidaamkani wuxuu raadiyaa xog cusub ama si bilaash ah, qaadashada xogta cusub ama hadda jirta iyo kaydinta si aad u hesho. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah barnaamijyada kaydka webka waxaa loogu talagalay inay ururiyaan macluumaadka ku saabsan badeecadaha laga helo eBay iyo Amazon. Waxay naga caawiyaan in ay naga ilaaliyaan waxa ka socda suuqa - apple computer repair in san francisco.
Aan eegno liiska xarumaha shabakada ugu fiican ee shabakadda internetka:
11) Dexi.io waxay taageertaa ururinta xogta meelo badan oo ka mid ah goobaha waxayna ubaahan tahay inaan la soo dejinin. Waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad furto boggeeda rasmiga ah oo aad ku bilowdo soo saaridda xogtaada. Qalabkani wuxuu la yimaadaa tafatiraha ku salaysan shabakadda, xogta waxaa lagu keydiyaa Google Drive iyo Box.net.
Scrapinghub waa barnaamij ka saarista xogta daruuraha ku salaysan oo ka caawiya horumarinta iyo barnaamijyadeyaal inay helaan xogta qiimaha leh. Barnaamijkani wuxuu isticmaalaa kumbiyuutar yaryar oo la yiraahdo Crawlera, kaas oo ka caawiya in uu gurguuro tiro badan oo ka mid ah bogagga internetka ee barkinta..
VisualScraper waxaa loola jeedaa in la xoqdo xogta qaab qoraal iyo sawirro ah; barnaamijkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu ururiyo macluumaadka laga helo bogagga shabakadda aasaasiga ah iyo kuwa sare. Waxaad si sahlan u ururin kartaa, u maamuli kartaa uguna abaabuli kartaa xogtaada webka iyada oo la isticmaalayo interface-user friendly.
Spinn3r waxay ka caawisaa naqshadeynta tusmooyinka isku midka ah ee Google iyo kaydinta xogtaada la soo saaro ee faylasha JSON. Sawirkan shabakada ah ayaa si joogto ah ugu sawiraya boggagaaga iyo inuu ka helo warar ka yimid ilo kala duwan si aad u hesho daabacadaha waqtiga-dhabta ah.
80legs waa firfircoon awood leh, awood leh oo dabacsan oo wax taraya iyo wax soo saaraha xogta. Waxaad u habeyn kartaa barnaamijkan sida shuruudahaaga madaama ay soo qaadato xogta aadka u ballaaran.
Soo-qabsoome waa kormeer caan ah oo leh calaamado fara badan. Waxaa intaa dheer, way wanaagsan tahay in la dhoofiyo xogta Google Drive waxayna faa'iido u tahay labada barnaamijyo iyo barnaamijyadaba. Qalabkan bilaashka ah wuxuu si toos ah u abuuri doonaa XPaths yar yar ee URL-yadaada.
OutWit Hub waa firfircooni firfircooni leh oo leh sifooyin farabadan oo xog ah. Waxay ka caawisaa fududeynta raadinta shabakadeena waxayna si toos ah ugala xiriiri kartaa boggaga internetka, kaydinta xog badan oo saacad kasta ah.
Import.io waxay bixisaa samaynta xogaha gaarka ah iyagoo soo dejinaya macluumaadka bogag gaar ah oo u dhoofinaya faylasha CSV. Barnaamijkani wuxuu isticmaalaa tiknoolajiyada kumbuyuutarka oo wuxuu ka dhigaa malaayiin xog ah maalin kasta.